Home » Freebies » Sheeg Dhamaan Saxeexaaga Dabeecada ah ee BILAASH ah
Dadka intooda ugu badani waxay ogaadaan isku-dhafka aasaasiga ah ee miisaanka lumay waa in la cuno mid sax ah oo jimicsi ah ... laakiin waxa jira haddii ay jirto hab sahlan oo lagu gaari lahaa yoolalkaaga? Ma jeclaan laheyd inaad maqasho? Waa hagaag halkan. Waa dheeraad ah oo lagu magacaabo NatureThin.
NatureThin waa miro isku dhafan oo khudradda ah oo lagu duubo nafaqooyinka muhiimka ah ee dadka ka caawiya miisaanka si dabiici ah u dhinta. NatureThin waxay bixisaa Vitamiin AE, potassium iyo biotin. Dadka intooda ugu badan waxay u dhacaan inay ka maqan yihiin fitamiinadaas. Caawimadan, oo loogu talagalay inay gacan ka geysato taageerida miisaan lumis caafimaad leh, isla mar ahaantaana ay bixiso fitamiino iyo nafaqooyin muhiim ah oo aad u baahan tahay ... .Caawinaad ka caawi inaad soo gudubto miisaankaaga miisaankaaga!
Wargeyska kale ee ku saabsan NatureThin waa inaad awoodaan iskuday inaad BILAASHO! Wakhti xaddidan oo kaliya, waxaad heli kartaa maalinta 16 oo bilaash ah oo ah NatureThin si aad u aragto waxa ay tahay wax walba ka hor intaadan go'aansan inaad iibsato. Guji hoose si aad u dalbato dhaladaada dhashinka ah ee NatureThin.